Egwuregwu / Ngwa / Ọrụ Dị Ike nke WEB / IoT Development - Hapụ ya ma ọ bụrụ na mmemme egwuregwu, ngwa, WEB, IoT mmepe na ọrụ!
Ngwaọrụ WEB / ngwa / IoT sensor development
Nkwalite nkwado VR · ọrụ mmepụta ọdịnaya
フ ェ イ ス ブ ッ ク (ọrụ)
Ihe dị ọhụrụ
Ozi kachasị ọhụrụ banyere Ọrụ Dị Ike
[Ntọhapụ akụkọ] Super Real Mahjong P8 tọhapụrụ
Ọgọst 22, 2018
Banyere ezumike ezumike
Anyị wepụtara ngwa ngwa nnyefe fax
Anyị ga-akwado gị ka ị jikọọ na ihe nkesa na-adịghị akwado TLS 1.2
Dragọn Dragon Shogi Online (Njikọ nke oge a) ga-akwụsị
Ọ bụ ọrụ nke Ike Craft
Site na ngwa ngwa (iPhone / Android), egwuregwu egwuregwu na egwuregwu ndị na-eji ọkụ, biko kwadoro gụnyere atụmatụ atụmatụ, ihe nkesa ihe ntanetị, mmepe ngwa, njikwa ihe omume. Anyị na-enye usoro ihe omume dị mma nke na-eji usoro mkpanaaka anyị. Anyị na-enyekwa ndị nọnyeere ọrụ ndị egwu egwuregwu, biko kpọtụrụ anyị maka ịchọta obodo na mba ọ bụla.
Ntugharị & Ntanetị Ntanetị
Anyị na-enye ọrụ nkwụsịtụ site na nhazi atụmatụ - mmepụta ~ ọrụ ~ melite Anyị ga-azaghachi ọsọ ọsọ site na mmepụta ụlọ na yana mmepụta dịka uto nke saịtị ahụ kwekọrọ na nkesa igwe ojii. Anyị nwere ndekọ ndekọ nke ọtụtụ saịtị ama, ngwa HTML, nhazi egwuregwu nke SNS, ụlọ ọrụ PC, iwu ụlọ ọrụ igwe ojii na ịrụ ọrụ. Anyị nwere ike ijikwa ebubo ọrụ, nchọpụta nhụsianya, ozi nchịkwa, ntanetị wdg. Biko jụọ dịka onye ọrụ nke ụlọ ọrụ gị n'ụzọ ọ bụla. Anyị nwere ọtụtụ mmezu nke ngwa weebụ nke ngwa ahịa!
Anyị ga-agbakwụnye VR ọdịnaya e kere eke, mmeghe nke usoro ntụrụndụ VR, wdg.
Site na MightyCraft nke dị mma na egwuregwu mmadụ, ihe ọhụrụ a na-elekwasị anya na ngwa nkịtị, ngosipụta ngosi nkà na ụzụ pụtara! Ọ bụrụ na ọ na-adọrọ mmasị ọbụna maka obere ihe ọ ga-eme ya! Dịka ebe iji chọpụta nkà na ụzụ dị ike "Ike Craft" na okwukwe, m ga-anọgide na-anapụta "ụlọ ikwiikwii" n'ọdịnihu!
Anyị ga-ewebata ụfọdụ n'ime mmepụta anyị. E nwere ihe karịrị 400 ngwa maka ngwa na ihe karịrị saịtị 50 maka sistemụ weebụ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Kokkuma
Onye na-agba ọsọ dragọn nke counterattack
Nhazi nke SNS
Nnukwu ụlọ ọrụ nkà na ụzụ dị ike
Mee bot n'ime Chatwork (1) - webhook na php
Ị nwere ike iji webhook maka API chatwork / Ọ bụrụ na ị nwere webhook ị nwere ike ịbanye na Chatwork / Iji concohook Conconfiguration / Kwenye data zitere webhook na PHP[...]
Mbelata ọsọ ọsọ na Sapporo na DS-Lite (IPv6 IPoE) njikọ
N'elu ụlọ ọrụ Sapporo, ntinye eriri ọnụọgụ NTT FLET ji ọsọ ọsọ bụ nsogbu. Ụdị FLET'S bụ ụdị ụlọ ụdị 100 Mbps. Na n'ehihie, ọ dịghị mkpa dị ukwuu, ma mgbatị ọsọ mgbe mgbede bụ ọrụ dabere na ụbọchị ahụ[...]
Weghachite Linux nkewa (akara iwu)
Ike mgbasa ozi dị ugbu a na-arị elu karịa utu ọnụahịa. E jiri ya tụnyere nchekwa nchekwa na nchekwa nchekwa ọtụtụ afọ gara aga, ọnụahịa ahụ bụ ọtụtụ ugboro ike na ọnụahịa bụ obere. Oge a, M depụtara Linux dum disk n'ime nnukwu ụgbọala mbanye[...]
Reinstall Cygwin na Windows XP ugbu a
Ọ bụ ihe na-emekarị nke Ịkpọ oku mgbapụta ụdị (Ransomware), e gosipụtara na Windows XP ka nọ n'ọrụ n'ụwa. Ọ bụ ezie na Microsoft ekwesịghị ịbụ nkwado, Microsoft na-egosiputa akara. Ee, m[...]
Jamaha NVR 500 ka onye ahịa SIP nke Hikari Denwa
Ọ bụ ụlọ ọrụ N nke Tokyo. M gbalịrị ijikọta router nke Yamaha "NVR 500" dịka onye ahịa SIP nke "Hikari Denwa router" PR - S300NE ". Azụ bụ "Onye na-akwọ ụgbọala" Hikita Denwa "NTT amaziri" PR - S300NE ". Aka[...]
Ntugharị ọnọdụ VR na smartphone
Ọ bụ ọrụ Z nke Sapporo. Ejila ngwaọrụ smartphone dị ka akụkụ nke nnyocha nyocha. Ihe m chọrọ ime bụ ịchọpụta ọnọdụ nke ijegharị dịka ịga ije ma jikọta ya na ihuenyo nke VR (ọdịdị nke eziokwu). Na ama naanị,[...]
Ụdị nkwalite anaghị adaba na Windows 10
Ọ bụ ụlọ ọrụ N nke Tokyo. Oge nkwụnye nkwalite nke Windows 10 ga-abụ ọnwa July 29, ya mere nkwụsị ụlọ ahụ na-eme nke ọma. A na-etinye Windows 10 na arụ ọrụ na-ejighị ya, mana Windows 10 abụghị otu[...]
Nkwado nkwado nke DB na FuelPHP
Ọ bụ K nke ụlọ ọrụ Sapporo. Na omenala, ebumnobi nke usoro ihe nkesa (LAMP environment) na-elekwasị anya na mmepe nke usoro ya, mana na afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-eji ihe ndị ọzọ na-emeghe emepe. Usoro nke anyị adịghịkwa njọ[...]
Ihe ị na-enweghị ike ime na Unity WebGL
Ọ bụ ụlọ ọrụ G nke Tokyo. Ọ dịla anya ruo ogologo oge ebe ọ bụ na Unity ejikọtara na WebGL, mana o yiri ka ọ bụ ihe ọmụma Japanese na-adịghị adị banyere WebGL taa. Taa dị na nsochi m mere, ma Unity WebG[...]
Mepụta ihe nlereanya 3D site na foto na 123D ịnweta na gosipụta na Ịdị n'otu
Ọ bụ O nke ụlọ ọrụ Sapporo. M kere 3D eji eji AutoDesk 123D Catch ma gbalịa igosipụta esemokwu na Ịdị n'otu. 123D Catch bụ ngwa na-enye gị ohere ịmepụta data nlereanya 3D site na foto[...]
Isi ụlọ ọrụ: 〒 171 - 0022
MI Owuwu 3F 2-8-5 Minami Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo
Office Sapporo: 〒 060-0809
Copyright (C) 2018 Ike Craft Co.